चारआली जङ्गलमा श्रीमानको ह त्या गरियो भन्दै श्रीमती र आमा रु दै मिडियामा,छोरिले खोलिन ड रलाग्दो भित्री रह स्य र नालीबेली (भिडियो सहित) – Gorkhali Dainik
चारआली जङ्गलमा श्रीमानको ह त्या गरियो भन्दै श्रीमती र आमा रु दै मिडियामा,छोरिले खोलिन ड रलाग्दो भित्री रह स्य र नालीबेली (भिडियो सहित)
April 5, 2021 83
बिर्तामोडको गाउँले होटलका सञ्चालक तिलक निरौला चारआली जंगलमा मृ त अवस्थामा फेला परेका छन । त्यससंगै जङ्गलमा एकाएक मानिसहरुको भिड बढेर प्रहरीलाई समेत अ नुसन् धान गर्न गाह्रो भएको थियो ।
रह स्यमय मृ त्यु भएका तिलक बिर्तामोड मनमोहन हस्पिटल छेउमा रहेको गाउँले होटल संचालन गर्थे । छिमेकीहरुका अनुसार सारै मिलनसार उनी सबैका प्यारा थिए । कसैले नसोचेको भयो भन्दै धेरै चि न्तामा देखिन्थे उपस्थित सबै । तिलक निरौला मोटरसाइकलसहित २ दिनअघि देखी बे पत्ता भएको सामाजिक सञ्जालमा सूचनाको रुपमा आएको थियो । खोजी कार्य तिब्र रुपमा गरेको परिवारले कतै भेट्न सकेन ।
उनको बारेमा मे. ९ प २२०९ नम्बरको साइन मोटरसाइकलसहित निरौला बेप त्ता भएको सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट भएको थियो । चारैतिर चर्चा चलेको थियो । बिर्तामोड-५ बस्ने निरौलाको श व जंगलमा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ । ला श जंगलभित्र रहेको र ह त्या भए नभएको बारेमा अनुसन्धान गर्न प्रहरी टोली कुकुर सहित घट नास् थल पुगिसकेको र प्रारम्भिक अ नुस न्धान समेत सुरु भइसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ ।
घ ट नास्थलमा पुगेर प्रहरीले घटनाबारे थप अ नुस न्धान प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । शब पो स्टमार्टमका लागि पठाइसकेर तिब्र गतिमा अनु स न्धान गरिदै गरेको प्रहरीले जनाएको छ । आज घ टनास्थल पछि गाउँले होटलमा पुगेर तिलककि श्रीमती आमा र छोरीसंग कुराकानी गरिएको छ । उनिहरुले रुदै यस्तोसम्म सुनाए कि त्यहा उपस्थित सबैजनाको रु वाबासी नै चल्यो ।
आमाले बोलेका हरेक शब्दले सबैको मन छोयो । श्रीमतीलाई हिड्नुअघि फोनमा यस्तोसम्म भनेका रहेछन । श्रीमती र छोरिले रु दै खोले सुरुदेखिको कसैले नसोचेको डर लाग्दो भित्री रहस्य र नालीबेली तलको भिडियोमा हेर्नुहोला आँसु आउनेछ
Prevपेन्टिङ गरेर परिवार पाल्दै,२४ बर्षिय तारा गुरुङ ! देख्ने जति सबै चकित पर्छन,( भिडियो)
NextBreaking: भर्खरै आयो नेपालमा शक्तिशाली भुकम्पको धक्का , मानिसहरु घर बाहिर निस्किए